Izindaba - Zonke izitifiketi zokubhaliswa ze-FDA azikho emthethweni
Zonke izitifiketi zokubhalisa ze-FDA azikho emthethweni
I-FDA yakhipha isaziso esinesihloko esithi “ukubhaliswa nokufakwa kuhlu kwensiza” kuwebhusayithi yayo esemthethweni ngomhla ka-23 Juni, eyagcizelela ukuthi:
I-FDA ayizikhiphi Izitifiketi Zokubhalisa ezikhungweni zedivayisi yezokwelapha. I-FDA ayiqinisekisi ukubhaliswa nokufakwa kuhlu
imininingwane yamafemu abhalisile futhi abhalisiwe. Ukubhalisa nokufakwa kuhlu akusho ukwamukelwa noma ukuvunyelwa kwenkampani
noma amadivayisi abo.
Izinkinga esidinga ukuzinaka ekubhalisweni kwe-FDA zimi ngale ndlela elandelayo:
Umbuzo 1: iyiphi inkampani ekhiphe isitifiketi se-FDA?
IMP: asikho isitifiketi sokubhaliswa kwe-FDA. Uma umkhiqizo ubhaliswe ne-FDA, inombolo yokubhalisa izotholakala. I-FDA izonikeza umfakisicelo incwadi yokuphendula (esayinwe yisikhulu esiphezulu se-FDA), kepha asikho isitifiketi se-FDA.
Ukumenyezelwa kwe-FDA kwesaziso esinje ngalesi sikhathi kuyisikhumbuzo esinamandla! Ngenxa yokuthuthuka kwakamuva kwesimo sobhadane e-United States, isidingo semikhiqizo yokuvikela ubhubhane lwezokwelapha ethunyelwa e-United States sikhule kakhulu, futhi nesidingo sokubhaliswa kokuthunyelwa kwamanye amazwe naso sikhuphukile
Lapho amanye amabhizinisi ezenza i-FDA ukukhipha izitifiketi kubakhiqizi, amanye amabhizinisi okusabalalisa angathola “izitifiketi ze-FDA” mbumbulu lapho ebonisana nabakhiqizi.
Umbuzo 2: ingabe i-FDA iyayidinga ilabhorethri eqinisekisiwe?
A: I-FDA iyinhlangano yokuphoqelela umthetho, hhayi i-ejensi yesevisi. Uma othile ethi bayilabhorethri yokuqinisekisa ye-FDA, okungenani badukisa abathengi, ngoba i-FDA ayinayo imisebenzi yomphakathi
Ama-ejensi wokuqinisekisa ubulili namalabhorethri, akukho okubizwa nge- "laboratory eqokiwe." Njengesikhungo sokuphoqelela umthetho, i-FDA akufanele ihlanganyele ezintweni ezinjengokuba ngunompempe nomsubathi. I-FDA izohlola kuphela insizakalo
Ikhwalithi ye-GMP yelabhorethri izokwamukelwa, bese kuthi lowo oqeqeshiwe anikezwe isitifiketi, kepha ngeke "sikhethwe" noma sinconywe emphakathini.
Umbuzo 3: ingabe ukubhaliswa kwe-FDA kudinga umenzeli wase-US?
IMP: Yebo, ibhizinisi kufanele liqoke isakhamuzi sase-US (inkampani / Inhlangano) njenge-ejenti yaso lapho sibhalisa ne-FDA. Umenzeli ubhekene nezinsizakalo zenqubo ezise-United States, okungabezindaba ukuxhumana ne-FDA kanye nomfakisicelo.
Amaphutha ajwayelekile ekubhalisweni kwe-FDA
1. Ukubhaliswa kwe-FDA kuhlukile kunesitifiketi se-CE. Imodi yesitifiketi sayo ihlukile kunqubo yokuhlola umkhiqizo we-CE + imodi yesitifiketi yokubika. Ukubhaliswa kwe-FDA empeleni kwamukela imodi yesimemezelo sobuqotho, okusho ukuthi, unemodi enhle yesimemezelo sokholo semikhiqizo yakho
Ngokuya ngamazinga afanele nezidingo zokuphepha, futhi kubhaliswe kuwebhusayithi ye-US Federal, uma kukhona ingozi ngalo mkhiqizo, khona-ke kufanele ithwale umthwalo ohambisanayo. Ngakho-ke, ukubhaliswa kwe-FDA kwemikhiqizo eminingi, akukho sivivinyo sokuthumela isampula
Futhi isitatimende sesitifiketi.
2. Isikhathi sokuba semthethweni kokubhaliswa kwe-FDA: Ukubhaliswa kwe-FDA kusebenza unyaka owodwa. Uma kungaphezu konyaka owodwa, idinga ukuhanjiswa kabusha ukuze ibhaliswe, futhi imali yonyaka ethintekayo nayo idinga ukukhokhwa futhi.
3. Ngabe i-FDA ibhaliswe ngesitifiketi?
Eqinisweni, asikho isitifiketi sokubhaliswa kwe-FDA. Uma umkhiqizo ubhaliswe ne-FDA, inombolo yokubhalisa izotholakala. I-FDA izonikeza umfakisicelo incwadi yokuphendula (esayinwe yisikhulu esiphezulu se-FDA), kepha asikho isitifiketi se-FDA.
Isitifiketi esivame ukusibona sikhishwa yi-ejensi yokulamula (i-ejenti yokubhalisa) kumenzi wazo ukufakazela ukuthi sisizile umkhiqizi ukuqedela “ukubhaliswa kwendawo yokukhiqiza kanye nokubhaliswa kohlobo lomkhiqizo” okudingwa yi-FDA
(ukusungulwa kokubhaliswa nohlu lwedivayisi), uphawu oluqediwe ukusiza umenzi ukuthi athole inombolo yokubhalisa ye-FDA.
Ngokwamazinga ahlukene engcuphe, i-FDA ihlukanisa amadivayisi wezokwelapha ngezigaba ezintathu (I, II, III), kanti isigaba III sinamazinga aphezulu engcuphe.
I-FDA ichaze ngokucacile ukuhlukaniswa komkhiqizo nezidingo zokuphatha zedivayisi ngayinye yezokwelapha. Njengamanje, kunezinhlobo ezingaphezu kuka-1700 zekhathalogi yedivayisi yezokwelapha. Uma noma iyiphi into yezokwelapha ifuna ukungena emakethe yase-US, kufanele iqale icacise ukuhlukaniswa kanye nezidingo zokuphathwa kwemikhiqizo esetshenziselwe ukumaketha.
Ngemuva kokucacisa imininingwane engenhla, ibhizinisi lingaqala ukulungisa izinto zokusebenza ezifanele, bese libika kwi-FDA ngokwezinqubo ezithile zokuthola imvume. Kunoma yimuphi umkhiqizo, amabhizinisi adinga ukubhalisa nokufaka kuhlu imikhiqizo.
Kwemikhiqizo yeklasi I (ebalwa cishe ngama-47%), ukulawula okujwayelekile kuyasetshenziswa. Iningi lemikhiqizo idinga ukubhaliswa, ukufakwa kuhlu nokuqaliswa kwamazinga we-GMP, futhi imikhiqizo ingangena emakethe yase-US (imbalwa kakhulu yayo exhunywe ne-GMP)
Inani elincane kakhulu lemikhiqizo ebekiwe lidinga ukuhambisa isicelo esingu-510 (k) ku-FDA, okuyi-PMN (isaziso sangaphambi kokuthengiswa);
Ngemikhiqizo yesigaba II (ebalwa cishe ngama-46%), kwenziwa ukulawula okukhethekile. Ngemuva kokubhaliswa nokufakwa kuhlu, amabhizinisi adinga ukusebenzisa i-GMP futhi athumele isicelo esingu-510 (k) (imikhiqizo embalwa ingu-510 (k) ukukhululwa);
Emikhiqizweni yekilasi III (cishe u-7%), ilayisense yangaphambi kokuthengisa iyasetshenziswa. Ngemuva kokubhalisa nokufakwa kuhlu, amabhizinisi kufanele asebenzise i-GMP futhi athumele isicelo se-PMA (premarket application) ku-FDA (Ingxenye III)
Emikhiqizweni yekilasi I, ngemuva kokuthi ibhizinisi lithumele imininingwane efanele ku-FDA, i-FDA yenza isimemezelo kuphela, futhi asikho isitifiketi esifanele esikhishelwa ibhizinisi; yamadivayisi wesigaba II no-III, ibhizinisi kufanele lithumele i-PMN noma i-PMA, ne-FDA izokwenza kanjalo
Nikeza ibhizinisi incwadi evunyelwe yokufinyelela emakethe ngokusemthethweni, okusho ukuthi, vumela ibhizinisi ukuthi lithengise ngqo imikhiqizo yalo emakethe yedivayisi yezokwelapha yase-US ngegama layo.
Ukuthi kuya yini ebhizinisini ukuze kuhlolwe i-GMP kunqubo yokufaka isicelo kunqunywa yi-FDA ngokwezinga lobungozi bomkhiqizo, izidingo zokuphatha kanye nempendulo yemakethe nezinye izinto ezibanzi.
Kulokhu okungenhla, siyabona ukuthi iningi lemikhiqizo lingathola isitifiketi se-FDA ngemuva kokubhaliswa, ukufakwa kuhlu komkhiqizo kanye nokuqaliswa kwe-GMP yamadivayisi wezokwelapha, noma ukuhanjiswa kwesicelo esingu-510 (k).
Ungahlola kanjani ukuthi ngabe umkhiqizo ubhalisiwe yi-FDA noma ubhaliswe ku-510k?
Ukuphela kwendlela egunyazayo: hlola kuwebhusayithi ye-FDA
Isibani Samazinyo, Halogen Examination Lamp, Ukuhlolwa Kwezokwelapha, I-Halogen Lamp Ye-Biochemical Analyzer, ukukhanya kwe-wall mount light, Kwaholela Headlight Okuhlinzwa,